एमसीसी नेपालका लागि घातक छ : देव गुरुङ – Lokpati.com
मृत्यु प्रधानमन्त्री चितवन नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड पक्राउ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस अपराध राशिफल अमेरिका सरकार नेकपा
एमसीसी नेपालका लागि घातक छ : देव गुरुङ
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता देव गुरुङले अमेरिकाले घुमाउरो ढङ्गले एमसीसीमार्फत नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउने प्रयत्न गरिराखेको बताएका छन्। उनले एमसीसी इण्डो प्यासिफिकबाट अलग भएमा नेपालले स्वीकार गर्न सक्ने बताए।
तर अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ताले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत नै हो भनेर बोलेकोले यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए। उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाले घुमाउरो ढङ्गले एमसीसीमार्फत नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउने प्रयत्न गरिराखेको छ। यहाँका राजदूतावासका प्रवक्ताले पनि एमसीसी भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत नै हो भनेर बोले। गत वर्ष उनीहरूको रक्षा सहायक मन्त्री र विदेश सहायक मन्त्रीले पनि बोलेकै विषय भयो। त्यही इण्डो प्यासिफिक नीतिलाई नै अगाडि बढाउनका लागि एमसीसी प्रोजेक्टहरु चलिराखेको छ भनेर उनीहरुकै डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको छ। इण्डो प्यासिफिककै डकुमेन्टमा पनि यो उल्लेख गरेको छ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘त्यस कारण उनीहरू नै घोषितरुपमा नै लागिराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसबाट पृथक् कसरी गराउने ? यदि यो आर्थिक विकासको कार्यक्रम मात्रै हो भने इण्डो प्यासिफिकबाट पृथक् गराउनुपर्छ। पृथक् गराउन सकेन भने त्यो त सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा छ उनीहरुले भनिरहेका छन्। यही कुरा स्पष्ट पार्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्णय हो। एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफकबाट अलग गराउन चाहे भने त्यस्ता आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु नेपालले लिन सक्छ, त्यसमा समस्याको विषय भएन। तर, सैन्य रणनीतिमा जोडिएको विषयमा त हामी जान सक्ने हुँदैन।’
उनले अमेरिकाले भनेको इण्डो प्यासिफिक पार्टनरसीप मुख्यगरी एक प्रकारको फौजी आतंक सिर्जना गर्ने लाइन जस्तो देखिएको बताए। उसले अमेरिकाले फौजी आतंक मच्चाएर आफ्नो सुप्रिमेसी कायम राख्ने कोसिस गरिराखेको जस्तो देखिएको उनले बताए। अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘हामीले बोल्ने कुरा व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत कोणबाट हेर्दाखेरि यो अमेरिकी साम्राज्यवादको ज्यादै ज्यादतीपूर्ण कार्य हो भन्ने देखिन्छ। इरानी सेनापतिलाई इराक भ्रमणको बेलामा अमेरिकाले हमला गरेर हत्या गर्ने भन्ने कुरा त यो अत्यन्तै निन्दनीय हो भन्ने लाग्छ। यो हमला इरान र इराकको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिकै हमला हो भन्ने देखिन्छ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, त्यस कारण इराकले पनि त्यहाँबाट अमेरिकी सेनालाई फिर्ता गर्न निर्णय गरेको छ। इरानले पनि हत्याको विरोधमा प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ। अहिले चौतर्फीरुपमा नै साम्राज्यवादको दादागिरीको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो कुरा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै सायद आउला भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। यो घटनाबारे अहिलेसम्म पार्टीको बैठक बसेर कुनै छलफल भएको छैन। बैठक बसेको समयमा यी कुराहरु उठ्नेछन्।
एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफकबाट अलग गराउन चाहे भने त्यस्ता आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु नेपालले लिन सक्छ, त्यसमा समस्याको विषय भएन। तर, सैन्य रणनीतिमा जोडिएको विषयमा त हामी जान सक्ने हुँदैन। अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक पार्टनरसीप भनेर भनेको नै मुख्यगरी एक प्रकारको फौजी आतंक सिर्जना गर्ने लाइन हो भन्ने देखिन्छ। अहिले विश्व उदारीकरण, निजीकरण र बजारीकरणको प्रतिस्पर्धामा गइराखेको अवस्थामा सायद अमेरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन र अरु मुलुकहरुले अग्रस्थान लिन थाल्यो।
अरु मुलुकहरुले तीब्र आर्थिक विकास गर्न थाले। पश्चिममा खास गरी अमेरिकाको अर्थतन्त्र डाउन हुन थाल्यो। यसले गर्दा अमेरिकाले आफ्नो सुप्रिमेसी कायम राख्न चाहन्छ, यसका लागि एउटै फिल्ड भनेको फौजी आतंक मच्चाएर उसले आफ्नो सुप्रिमेसी कायम राख्ने कोसिस गरिराखेको देखिन्छ, उनले भने।
अहिले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको जस्तो परिस्थिति छैन। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, सहमति र समझदारीको आधारमा अगाडि जानुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले जुन बडापत्र स्थापित गरेको छ। जतिसुकै विवादहरु भए पनि सम्वाद र सहमतिको मोडेलबाट हामीले अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर, यो मोडेलमा जानुको साटो अमेरिका युद्धको मोडेलमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि प्रकारान्तरले अमेरिकाको परराष्ट्र नीति नै आत्मघाती हुनेजस्तो देखिन्छ।
नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न आन्दोलनका आधारमा जानुपर्छ र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। सम्वाद र सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानले जसरी स्थापित गरेको छ, त्यही आधारमा हामी अगाडि जानुपर्छ, नेता देव गुरुङले भनेका छन्। उनले एमसीसीबारे पार्टीको स्थायी समति बैठकमा समेत खुलेर विरोध गरेका थिए।
इरानमा गयो भूकम्प
श्रम र श्रमिक बैंक खाेल्ने तयारी
कांग्रेसको आधिकारिक धारण, ‘सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने माग राखेका छैनौं’
प्रचण्डकाे भिडियाे सन्देश: महामारीविरुद्ध मिलेर लडौं, मानव जातिले जित्नेछ
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मधुरा श्रेष्ठजस्ता विज्ञ हुनुपर्छ : डा. युवराज संग्रौला
यस्तो छ ओली-प्रचण्डको नेकपा कार्यकर्तालाई विशेष परिपत्र